एजेन्सी । भारतबाट वर्षौ पहिले चोरी भएको प्राचिन कलाकृतिहरु अमेरिका-ब्रिटेनको एक संयुक्त समूहले खोजी गरेको छ ।भारतले हिजो(बिहिबार) आफ्नो ७३ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको क्षण आएको यस खबरलाई लिएर भारतीय...
एजेन्सी । कश्मीरमा भारत र पाकिस्तानबीचको नियन्त्रण रेखामा भएको गोली हानाहानमा परी पाँच जना भारतीय र तीन जना पाकिस्तानी सैनिक मारिएका छन् । पाकिस्तानी समाचार एजेन्सी डन न्युजले जनाए अनुसार नियन्त्रण र...
एजेन्सी । अकल्पनीय बेलायती उपनिवेशको शासनबाट सन् १९४७ को अगस्ट १५ मा स्वतन्त्रता हासिल गरेसँगै विश्व राजनीतिक मन्चमा आफ्नो उपस्थितिको निम्ति भारतले ठूलो कोसिस गर्दै आइरहेको छ । बेलायति राजनीतिक रणनीति...
एजेन्सी । दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा हिजो(सोमबार) आएको एक फोन कलले दिल्ली पुलिसलाई समस्यामा पार्यो । टर्मिनल–२ मा एक व्यक्तिले बेलुकी ८ बजेर ४९ मा दिल्ली पुलिसलाई एयरपोर्टलाई बचाउन सके बचाउ भन्ने...
एजेन्सी । भारतले अनुच्छेद ३७० खारेज गरेसँगै जम्मु-कश्मीरको अवस्थालाई लिएर संसारभरका मानिसहरुको चासो बढिरहेको छ । आज सोमबार इद भएकोले प्रशासनले केही इलाकामा आंशिक रुपमा कर्फयु हटाएको छ । भारत प्रशासि...
नयाँ दिल्ली । दुई महिनाको अनिश्चिता तोड्दै भारतीय कांग्रेस पार्टीले सोनिया गान्धीलाई अन्तरिम अध्यक्ष बनाएको छ । गत शनिबार १२ घण्टाको मन्थन पछि कांग्रेस कार्यसमितिको बैठकले पूर्व अध्यक्ष सोनिया गान्धी...
भारतीय सुप्रिम कोर्टमा अनुच्छेद-३७० खारेजीको विरुद्ध मुद्धा दर्ता
एजेन्सी । अनुच्छेद ३७० रद्ध गर्दै केन्द्र सरकारले जम्मु- कश्मीरमा धारा १४४ लागू गरेको अवस्थामा सरकार विरुद्ध मुद्धा दर्ता भएको छ । भारतीय सुप्रिम कोर्टमा पछिल्लो २४ घण्टा भित्र अनुच्छेद- ३७० को खारेज...
एजेन्सी । भारत सरकारले गत सोमवार जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि नयाँ बहस शुरु भएको छ। भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खा...
भारतमा बाढीका कारण ९५ जनाको ज्यान गुम्यो !
एजेन्सी । मनसुनका कारण उत्पन्न बाढीमा परेर भारतका दक्षिणी र पश्चिमी राज्यमा कम्तीमा ९५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मृत्यु हुनेमा ४० जना भन्दा बढी केरला राज्यका बासिन्दा रहेको बताइएको छ। बाढी प्रभावितहर...
काठमाडौं । भारतका पूर्ववित्तमन्त्री एवम् भाजपाका वरिष्ठ नेता अरुण जेटली विरामी भएपछि अस्पताल भर्ना भएका छन् । दिल्लीस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान -एम्स)को आईसीयूमा राखेर उनको उपचार भइरहेको छ ...
राज्यका सबै विशेषाधिकार खोसिएको भारतको जम्मु–काश्मीरमा चार दिनदेखि कर्फ्यु छ । राजधानी श्रीनगरलगायत सडक चोक, गल्लमा सैनिक तैनाथ छन् । पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु थुनिएका छन् । सर्वसाधारण घरबाट बाहिर निस्कन प...
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरी गिरफ्तार
एजेन्सी । भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव सीताराम येचुरी र नेता डी.राजालाई श्रीनगर एयरपोर्टमा गिरफ्तार गरिएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन । महासचिव येचुरी र नेता डी. राजाले जम्मु- कश्मीर...
जम्मु-कश्मीरबारे भारतले गर्यो नेपालसँग औपचारिक छलफल
काठमाडौं । विश्व राजनीतिमा तरंग ल्याउन सफल जम्मु कश्मीर घटनाका बारेमा भारतले नेपाललाई ब्रिफिङ गरेको छ । आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउने उद्धेश्य सहित भारतले मंगलबार भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचा...
यस्तो छ – ‘जम्मु-कश्मीर’ विवादको टाइमलाइन हिस्ट्री !
एजेन्सी । भारत सरकारले सोमवार जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेष दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० खारेज गरेपछि नयाँ बहस शुरु भएको छ। भारत सरकारले जम्मू-कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज...
भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज रहिनन्
एजेन्सी । भारतीय पूर्व विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको निधन भएको छ । उनी ६७ वर्षकी थिइन्। सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीकी वरिष्ठ नेत्री स्वराजको मंगलबार राति निधन भएको हो । उनलाई मङ्गलवार राति उपचारको ला...